गणेशमान सिहंको आज स्मृति दिवस मनाईंदै, यस्तो छ संघर्षको इतिहास :: a1nepal.com.np
गणेशमान सिहंको आज स्मृति दिवस मनाईंदै, यस्तो छ संघर्षको इतिहास
वि.स.२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर एवं नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको आज(आइतबार) स्मृति दिवस मनाईंदैछ । सिंहको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रम गरिदैछन् ।
१९७२ सालमा जन्मिएका सिंहको २०५४ साल असोज २ गते अर्थात् आजैका दिन निधन भएको थियो । यसक्रममा काठमाडौको शोभा भगवतीमा रहेको स्वर्गीय सिंहको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर सिंहको योगदानको स्मरण गरिँदैछ । लौहपुरुषका नामले समेत चिनिएका उनले नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राणाकालदेखि कठोर संघर्ष गरेका थिए ।
उनले वीपी कोइरालासँग मिलेर नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेका गणेशमान सिंह कांग्रेसले लिएका हरेक कदममा वीपीसँगै थिए । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि २०१४ सालको सत्याग्रह, २०१५ सालको संसदीय चुनाव र सरकार अनि २०१७ सालको महेन्द्रको प्रजातन्त्रमाथिको कूसम्म उनीहरु सँगसँगै रहे । जेल तोडेर भारत प्रवासमा रहँदा होस् वा मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा नेपाल फर्कदा या २०३७ सालको जनमत संग्रहमा सहभागि हुँदा मुद्दामाथि विमति रहँदा पनि वीपीसँग उनको साथ कहिल्यै टुटेन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको पद अस्वीकार गर्नुभएका नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व सिंहले प्रजातन्त्रको पहरेदारी गर्न रुचाएका थिए । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र २०४७ को संविधान निर्माणपछि उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुलाई आर्थिक क्रान्तिमा लाग्न बारम्बार घच्घचाएका थिए । त्यसो नगरेसम्म राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि प्रजातन्त्र स्थीर र स्थायी नहुने उनको धारणा थियो ।
तर सिंहका ती कालजयी विचार र सुझावलाई विपक्षीले त मानेनन् मानेनन् आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसले पनि सम्मान गरेन । जसका कारण विरक्तिएर जीवनको उत्तरार्धतिर उनले आफैले स्थापना गरी हुर्काएको पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए ।
सप्तकोशीमा डुंगा पल्टियो, ३७ को सशुकल उद्धार, केही बेपत्ता भएको आशंका के होला सिफारिस राजदूतहरूको नियुक्ति ? अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ ? संवैधानिक जटिलता, व्याख्या आआफ्नै सर्वनामको ‘दस मिनेट नाटक’ सम्पन्नः ३९ नाटक मञ्चन दाहाललाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश कल्पना फाउण्डेसनद्वारा दुई जेहेन्दार विध्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान मापसे कारबाहीको पैसा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि प्रवेशिका परीक्षामा छ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी, मनाङमा ६९ जना मात्र रवीन्द्र मिश्रको कविता बाचनबाट करिव ३४ लाख सहयोग संकलन सभामुखको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
← प्रवासी नेपाली नागरिक समाज इजरायलको नयाँ कार्यसमिति चयन	नागरिकता दिन सकिएला तर राष्ट्रपति, सेनापति बनाउन सकिँदैन : ओली →